Masar, 30 Jan 2014(Alldhooftinle.com)
Sida lagu daabacay wargeyska The Telegram oo ka soo baxa wadanka Australia ayaa sheegaya in Mr. Peter Greste iyo 20 kale weriyeyaal ah oo u shaqaynayey Televisionka Aljaziira lagu haysto dalka Masar ka dib markii lagu soo oogey denbiyo kala duwan.
Afar uu ka mid yahay Mr. Peter Greste ayaa lagu haystaa inay warar beena ka faafiyeen wadanka Masar iyagoo sheegaya inay lacag iyo qalabka warbaahinta siiyeen dad Masaari ah si ay warar been ah ugu soo ururiyaan.
Afartaa weriye ee warbeeneedka loo haysto ayaa laba ka mid ahi haystaan dhalashada Ingiriiska halka midna uu Australian yahay kan kalena uu yahay Dutch.
Inta kale ayaa la sheegay in iyagana loo haysto inay ku lug leeyhiin arimaha Argagaxisada iyo inay dhaawac u geeysanayeen isku duubnida wadanka Masar iyo nabadgelyadiisa.
Dhanka kale Wasiirka Arimaha Debeda ee wadanka Australia Ms Julia Pishop ayaa iyaduna xaqiijisay inay xidhiidh la samaysay Raysal Wasasraha dalka Masar dhowaana la sii deyn doono dhammaan weriyayaasha lagu haysto dalka Masar .